Danny Welbeck oo laga yaabo inuusan mardambe Ciyaarin Kubbada Cagta….(Sidee wax u jiraan??)+SAWIRRO – Gool FM
Danny Welbeck oo laga yaabo inuusan mardambe Ciyaarin Kubbada Cagta….(Sidee wax u jiraan??)+SAWIRRO
Byare November 9, 2018
(London) 09 Nof 2018. Danny Welbeck ayaa u baahday in Oxygen lagu xiro ka hor inta aan garoonka Bareelo looga qaadin kaddib dhaawac daran oo Canqowga ka gaaray ciyaartii ay Arsenal bar baraha goola la’aanta xalay la gashay naadiga Sporting Lisbon.
Waxaa la tuhsanaa inuu ka jabay Canqowga lugta Midig taa uu garoomada uga maqnaan karo inta ka harsan kal ciyaareedkan.
Yeelkeede, Johnny Wilson oo ah khabiir dhanka Caafimaadka ah ayaa sheegay in dhaawaca gaaray xiddiga reer England ay suuro gal tahay inuu gabi ahaan soo afjaro waayihiisa ciyaareed oo uusan mardambe ciyaarin kubbada cagta.
“Dhaawaca Welbeck oo ay suuro gal tahay jabniin Canqowga ah wuxuu soo afjari karaa wayihiisa ciyaareed ee kubbada Cagta,” Wilson ayaa sidaa ku soo qoray Boggiisa Twitter ka.
Khabiirka ayaa sidoo kale faah faahin dheeri ah ka bixiyay dhaawacyada gaara Canqoga iyo khatarta ay leeyihiin marka uu jabniin ku yimaado.
Ma Ogtahay in Chelsea ay CALANKA u sido Yurub!!??
RIKOODH: Benaadir oo noqotay kooxdii ugu horreysay ee Soomaaliyeed ee shaacisa Lacagaha ay Laacib ku soo iibsatay....(Waa Imise??)+SAWIRRO